विजयको कामको दोस्रो चरणका प्रभावहरू कसरी हासिल हुन्छन् | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
परमेश्वर देखा पर्ने घटनाको चाहना गर्ने सबैलाई हामी स्वागत गर्दछौँ।
सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका वचनहरूको पढाइ
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू
प्रवचन श्रृङ्खला: साँचो विश्‍वासको खोजी
मण्डली जीवनका गवाहीहरू
जीवन अनुभवका गवाहीसम्‍बन्धी चलचित्रहरू
धार्मिक सतावट सम्‍बन्धी चलचित्रहरू
कोरल भिडियो श्रृङ्खलाहरू
मण्डली जीवन—विभिन्‍न कार्यक्रम श्रृंखलाहरू
चलचित्रका विशेष अंशहरू
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: परमेश्‍वरलाई चिन्‍नु
परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू: इसाई जीवन
कार्यका तीन चरणहरू
परमेश्‍वर देखा पर्नु र उहाँको काम
आखिरी दिनहरूको न्याय
परमेश्‍वरको कामलाई चिन्‍नु
परमेश्‍वरको स्वभाव र उहाँसँग जे छ र उहाँ जे हुनुहुन्छ
बाइबल सम्‍बन्धी रहस्यहरू
धार्मिक धारणाहरू खुलासा गर्नु
मानवजातिको भ्रष्टता उजागर गर्नु
गन्तव्य र परिणामहरू
वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ (छनौट गरिएका)
जीवन अनुभवका गवाहीहरू
परमेश्‍वरकहाँ फर्किएको बारे गवाहीहरू
प्रभुको पुनरागमनलाई स्वागत गर्नु
विश्‍वास र जीवन
आत्मिक अन्योलता समाधान सम्‍बन्धी
वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ
न्याय परमेश्‍वरको घरबाटै सुरु हुन्छ
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका अत्यावश्यक वचनहरू
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका छनौटगरिएका वचनहरू
परमेश्‍वर आउनुभएको छ, उहाँ राजा हुनुहुन्छ
विजयको कामको दोस्रो चरणका प्रभावहरू कसरी हासिल हुन्छन्
सेवाकर्ताहरूको काम विजयको कामको पहिलो चरण थियो। आज विजयको कामको दोस्रो चरण हो। विजयको काममा पनि किन सिद्ध बनाइने कुरा उल्लेख गरिएको छ? यो भविष्यका लागि आधार निर्माण गर्नलाई हो। आज विजयको कामको अन्तिम चरण हो; यसपछि मानवजातिलाई सिद्ध पारिने कार्यको औपचारिक सुरुआत गर्ने महासङ्कष्टको अनुभव गर्ने समय आउनेछ। अहिले मुख्य विषय विजय हो, तर अहिले सिद्धताको प्रक्रियाको पहिलो चरणको समय पनि हो। यो पहिलो चरणमा मानिसहरूको ज्ञान र आज्ञाकारितालाई सिद्ध बनाउनु आवश्यक छ, जसले वास्तवमा विजयको कामका लागि आधार तयार गर्छ। यदि तँलाई सिद्ध पारिनु छ भने, तँ भविष्यको महासङ्कष्टमाझ दृढ भएर खडा रहन सक्‍नुपर्छ र कामको अर्को चरणलाई फैलाउन तैँले आफ्ना सबै थोक दिनुपर्छ; सिद्ध पारिनुको अर्थ यही हो, र यस्तो समय परमेश्‍वरले मानिसहरूलाई पूर्ण रूपमा प्राप्त गरिने समय पनि हो। आज हामी विजय गरिने बारेमा कुरा गर्दै छौं, जुन सिद्ध पारिने बारेमा कुरा गर्नुजस्तै हो। तर आज गरिने काम भविष्यमा सिद्ध पारिनुको आधार हो; सिद्ध पारिनका लागि, मानिसहरूले कठिन परिस्थितिको अनुभव गर्नैपर्छ, र कठिन परिस्थितिको यो अनुभवको आधार जितिने कार्यमा हुनुपर्छ। यदि मानिसहरूमा आजको जग छैन भने—यदि तिनीहरू पूर्ण रूपमा जितिएका छैनन् भने—कामको अर्को चरणमा तिनीहरूलाई दृढ भएर खडा हुन गाह्रो हुनेछ। जितिनु मात्रै अन्तिम लक्ष्य होइन। यो त शैतानको अगाडि परमेश्‍वरको गवाही दिने एउटा चरण मात्र हो। सिद्ध पारिनुचाहिँ अन्तिम लक्ष्य हो, र यदि तँलाई सिद्ध पारिएन भने, तँ नष्ट हुनेछस्। भविष्यमा कठिनाइको सामना गर्नुपर्दा मात्र तेरो वास्तविक कद देखिनेछ; भन्‍नुको अर्थ, तब मात्र परमेश्‍वरप्रतिको तेरो प्रेमको शुद्धताको स्तर स्पष्ट हुनेछ। आज मानिसहरूले भन्‍ने गरेको कुरा यो हो: “परमेश्‍वरले जेसुकै गर्नुभए पनि हामीले उहाँको आज्ञापालन गर्नैपर्छ। त्यसैले हामी प्रतिभार हुन इच्छुक छौं जसले परमेश्‍वरको महान् शक्ति र परमेश्‍वरको स्वभावको प्रकट गर्न सक्छ। परमेश्‍वर हामीप्रति दयालु हुनुभए पनि वा उहाँले हामीलाई सराप दिनुभए पनि, वा उहाँले हाम्रो न्याय गर्नुभए पनि, हामी अझै पनि परमेश्‍वरप्रति कृतज्ञ छौं।” तैँले यसो भन्‍नुले तँमा केही मात्रामा ज्ञान छ भन्‍ने मात्र देखाउँछ, तर यस्तो ज्ञान वास्तविकतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्‍ने कुरा यो ज्ञान वास्तविक हो कि होइन भन्‍ने कुरामा निर्भर हुन्छ। आज मानिसहरूमा त्यस्तो अन्तर्दृष्टि र ज्ञान हुनु भनेको विजयको कामको प्रभाव हो। तँ सिद्ध पारिन सक्छस् कि सक्दैनस् भन्‍ने कुरा कठिनाइको सामना गर्नुपर्दा मात्र देख्‍न सकिन्छ, र त्यस बेला तैँले आफ्नो हृदयबाट परमेश्‍वरलाई साँच्‍चै प्रेम गर्छस् कि गर्दैनस् भन्‍ने कुरा देखिनेछ। यदि तेरो प्रेम साँच्‍चै शुद्ध छ भने, तैँले यसो भन्‍नेछस्: “हामी प्रतिभार हौं, हामी परमेश्‍वरका हातका प्राणीहरू हौं।” जब तैँले अन्यजाति राष्ट्रहरूमा सुसमाचार फैलाउँछस्, तब तैँले भन्‍नेछस्, “म सेवा मात्रै गर्दै छु। हामीभित्रको भ्रष्ट स्वभावहरू प्रयोग गरेर परमेश्‍वरले हामीलाई उहाँको धर्मी स्वभाव देखाउन यी सबै कुरा भन्‍नुभएको छ; यदि उहाँले त्यस्ता कुराहरू नभन्‍नुभएको भए, हामी परमेश्‍वरलाई देख्‍न सक्‍नेथिएनौं, उहाँको बुद्धि बुझ्न सक्‍नेथिएनौं, न त त्यति महान् मुक्ति र त्यति महान् आशिष्‌ पाउन नै सक्‍नेथियौं।” यदि तँसँग साँच्‍चै यो व्यावहारिक ज्ञान छ भने, त्यो पर्याप्त छ। तर तैँले आज भन्‍ने धेरैजसो कुरामा कुनै ज्ञान छैन, र त्यो नारा मात्र हो: “हामी प्रतिभार र सेवाकर्ताहरू हौं; हामी जितिन र परमेश्‍वरका निम्ति गहन गवाही दिन चाहन्छौं।” चिच्याएर मात्र त्यसको अर्थ तँसँग वास्तविकता छ भन्‍ने हुँदैन, न त यसले तँसँग कद छ भनी प्रमाणित नै गर्छ; तँसित वास्तविक ज्ञान हुनुपर्छ, र तेरो ज्ञानलाई जाँच गरिनुपर्छ।
परमेश्‍वरले यो समय अवधिमा व्यक्त गर्नुभएका यी वाणीहरूलाई तैँले अझै धेरै पढ्नुपर्छ र तेरा कार्यहरूलाई तुलना गरी हेर्नुपर्छ: तँ पूर्ण रूपमै एक प्रतिभार होस् भन्‍ने कुरा एक निरपेक्ष तथ्य हो! आज तेरो ज्ञानको हद कति छ? तेरा उपायहरू, तेरा विचारहरू, तेरा व्यवहार, तेरा बोलीवचन र कामहरू—के यी सबै अभिव्यक्तिहरू परमेश्‍वरको धार्मिकता र पवित्रताका निम्ति प्रतिभार होइनन् र? के तिमीहरूका अभिव्यक्तिहरू परमेश्‍वरका वचनहरूद्वारा खुलासा गरिएको भ्रष्ट स्वभावका प्रकटीकरणहरू होइनन् र? तेरा सोचाइ र विचारहरू, तेरा प्रेरणाहरू र तँमा प्रकट भएको भ्रष्टताले परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावका साथै उहाँको पवित्रतालाई देखाउँछ। परमेश्‍वर पनि फोहोरको देशमा जन्मिनुभएको थियो, तर उहाँ फोहोरद्वारा कलङ्कित हुनुभएको छैन। उहाँ तँजस्तै त्यही फोहोरी संसारमा बस्‍नुहुन्छ, तर उहाँमा विवेक र समझ छ, र उहाँले फोहोरलाई घृणा गर्नुहुन्छ। तैँले आफ्नो बोलीवचन र काममा रहेको कुनै फोहोर फेला पार्न सक्दैनस्, तर उहाँले फेला पार्न सक्‍नुहुन्छ र उहाँले तँलाई ती कुराहरू देखाइदिनुहुन्छ। तेरा ती पुराना कुराहरू—तेरो विकास, समझ र ज्ञानमा रहेको कमी, र तेरो पछौटे जीवनशैली—ती सबैलाई आजको प्रकाशले ज्योतिमा ल्याएको छ; परमेश्‍वर यसरी काम गर्न पृथ्वीमा आउनुभयो भने मात्रै मानिसहरूले उहाँको पवित्रता र धर्मी स्वभावलाई देख्छन्। उहाँले तेरो न्याय गर्नुहुन्छ र तँलाई सजाय दिनुहुन्छ, जसले गर्दा तैँले समझ प्राप्त गर्छस्; कहिलेकहीँ, तेरो दुष्ट प्रकृति प्रकट हुन्छ र उहाँले त्यो तँलाई देखाइदिनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो हत्केलालाई जस्तै मानिसको सारको बारेमा पनि जान्‍नुहुन्छ। उहाँ तिमीहरूको माझमा जिउनुहुन्छ, उहाँले तैँले खानेजस्तै भोजन खानुहुन्छ र उहाँ उही वातावरणमा बस्‍नुहुन्छ—तैपनि, उहाँले धेरै कुरा जान्‍नुहुन्छ; उहाँले तँलाई खुलासा गर्न सक्‍नुहुन्छ र मानवताको भ्रष्ट सारलाई देख्‍न सक्‍नुहुन्छ। उहाँले मानिसका जीवनदर्शनहरू र कुटिलता र छलीपनलाई भन्दा बढी अरू कुनै कुरालाई घृणा गर्नुहुन्‍न। खास गरी उहाँले मानिसहरूका दैहिक अन्तरक्रियाहरूलाई घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँ मानिसका जीवन-दर्शनहरूसित परिचित नहनुहोला, तर मानिसहरूले प्रकट गर्ने भ्रष्ट स्वभावहरूलाई उहाँले स्पष्ट रूपमा देख्‍न र पर्दाफास गर्न सक्‍नुहुन्छ। उहाँले यी कुराहरूका माध्यमबाट मानिससँग बोल्‍न र उसलाई सिकाउनका लागि काम गर्नुहुन्छ, उहाँले यी कुराहरू मानिसहरूको न्याय गर्न र उहाँको आफ्नै धर्मी र पवित्र स्वभाव प्रकट गर्न प्रयोग गर्नुहुन्छ। यसरी मानिसहरू उहाँको कामका निम्ति प्रतिभारहरू बन्छन्। केवल देहधारी परमेश्‍वरले मात्र मानिसको भ्रष्ट स्वभाव र शैतानका सबै कुरूप अनुहारहरूलाई स्पष्ट पार्न सक्‍नुहुन्छ। उहाँले तँलाई दण्ड नदिनुभए पनि, र तँलाई उहाँको धार्मिकता र पवित्रताका लागि प्रतिभारको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुभए पनि, तैँले लज्‍जित महसुस गर्छस् र लुक्‍ने कुनै ठाउँ पाउँदैनस्, किनकि तँ अति नै फोहोरी छस्। उहाँले मानिसमा प्रकट भएका ती कुराहरू प्रयोग गरेर बोल्नुहुन्छ, र जब यी कुराहरू प्रकाशमा ल्याइन्छन् तब मात्र मानिसहरूले परमेश्‍वर कतिसम्‍म पवित्र हुनुहुन्छ भनी जान्दछन्। उहाँले मानिसहरूमा भएको थोरै अपवित्रतालाई समेत बेवास्ता गर्नुहुन्‍न, चाहे ती तिनीहरूको हृदयमा भएका फोहोरी विचारहरू नै किन नहोऊन्; यदि मानिसहरूका बोलीवचन र कामहरू उहाँको इच्छासँग मिल्दैनन् भने, उहाँले तिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहुन्‍न। उहाँका वचनहरूमा, मानिस वा अरू कुनै कुराको फोहोरको निम्ति कुनै ठाउँ छैन—यो सबैलाई प्रकाशमा ल्याइनुपर्छ। तब मात्र तैँले उहाँ साँच्‍चै मानिसजस्तो हुनुहुन्‍न भनी देख्‍नेछस्। यदि मानिसहरूमा थोरै मात्र पनि फोहोर छ भने, उहाँले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा घृणा गर्नुहुन्छ। कहिलेकहीँ यस्ता समयहरू पनि हुन्छन् जब मानिसहरूले बुझ्न सक्दैनन् र भन्छन्, “परमेश्‍वर, तपाईं किन त्यति धेरै रिसाउनुहुन्छ? तपाईं किन मानिसका कमजोरीहरूबारे विचार गर्नुहुन्‍न? तपाईं किन मानिसहरूप्रति थोरै क्षमाशील हुन सक्‍नुहुन्‍न? तपाईं किन मानिसको बारेमा ख्याल गर्ने गर्नुहुन्‍न? मानिसहरू कुन हदसम्म भ्रष्ट छन् भन्‍नेबारेमा तपाईंलाई स्पष्टसँग थाहा छ, तैपनि तपाईं किन अझै उनीहरूसँग यस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ?” उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, त्यसप्रति उहाँ घिनाउनुहुन्छ, र तँमा अवज्ञाको थोरै मात्र लक्षण छ भने पनि उहाँले विशेष रूपमा घृणा गर्नुहुन्छ। तैँले विद्रोही स्वभाव प्रकट गर्दा, उहाँले त्यो देख्‍नुहुन्छ र अत्यन्तै घिनाउनुहुन्छ—असाधारण रूपमा घिनाउनुहुन्छ। यिनै कुराहरूद्वारा उहाँको स्वभाव र परमेश्‍वर के हुनुहुन्छ भन्‍ने कुरा प्रकट हुन्छन्। जब तैँले आफैलाई तुलना गर्छस्, तब तैँले देख्छस् कि उहाँले मानिसले खाने खाना नै खानुभए पनि, उनीहरूको जस्तै लुगाफाटा लगाउनुभए पनि, तिनीहरू रमाउने कुराहरूमै रमाउनुभए पनि र तिनीहरूसँगै जिउनु र बस्‍नुभए पनि, उहाँ मानिसजस्तो हुनुहुन्‍न। के यो प्रतिभारको महत्त्व होइन? मानवका यिनै कुराहरूमार्फत परमेश्‍वरको शक्ति दर्साइन्छ; अन्धकारमार्फत ज्योतिको अनमोल अस्तित्व प्रस्ट पारिन्छ।
अवश्य नै, परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई यसैको खातिर मात्र प्रतिभार बनाउनुहुन्‍न। बरु, जब यो कामले फल फलाउँछ तब मात्र मानिसको विद्रोह परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावका लागि एउटा प्रतिभार हो भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ, र तिमीहरू प्रतिभार भएकाले मात्र तिमीहरूसित परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावको प्राकृतिक अभिव्यक्ति चिन्‍ने मौका हुन्छ। तिमीहरूको विद्रोहको कारण तिमीहरूलाई न्याय र सजाय गरिन्छ, तर तिमीहरूको विद्रोहले नै तिमीहरूलाई प्रतिभार पनि बनाउँछ, र तिमीहरूले तिमीहरूको विद्रोहको कारण नै परमेश्‍वरले तिमीहरूलाई प्रदान गर्नुहुने ठूलो अनुग्रह प्राप्त गर्छौ। तिमीहरूको विद्रोह परमेश्‍वरको सर्वशक्तिमान्‌ता र बुद्धिको प्रतिभार हो र तिमीहरूको विद्रोहको कारणले नै तिमीहरूले यति ठूलो मुक्ति र आशिष् प्राप्त गरेका छौ। तिमीहरूलाई बारम्बार मैले न्याय गरेको भए पनि, मानिसले पहिले कहिल्यै नपाएको ठूलो मुक्ति तिमीहरूले पाएका छौ। यो काम तिमीहरूका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। “प्रतिभार” हुनु पनि तिमीहरूका लागि अत्यन्तै मूल्यवान् कुरा हो: तिमीहरू प्रतिभार भएकाले, तिमीहरूको उद्धार भयो र तिमीहरूले मुक्तिको अनुग्रह प्राप्त गऱ्यौ, त्यसैले के प्रतिभार अत्यन्त मूल्यवान् छैन र? के यो ठूलो महत्त्वको कुरा होइन र? तिमीहरू परमेश्‍वर बस्‍नुभएकै क्षेत्रमा, त्यही फोहोरी देशमा बस्छौ, यसैले तिमीहरू प्रतिभार हौ र तिमीहरूले सबैभन्दा ठूलो मुक्ति प्राप्त गर्छौ। यदि परमेश्‍वर देह नबन्‍नुभएको भए, तिमीहरू जस्तो तुच्छ मानिसहरूप्रति को दयालु हुन्थ्यो होला र कसले तिमीहरूजस्तो नीच मानिसहरूलाई हेरचाह गर्थ्यो होला? कसले तिमीहरूलाई वास्ता गर्थ्यो होला? यदि परमेश्‍वर तिमीहरूमाझ काम गर्न देह नबन्‍नुभएको भए तिमीहरूले तिमीहरूभन्दा पहिलेका मानिसहरूले कहिल्यै नपाएको यो मुक्ति कहिले पाउनेथियौ? यदि म तिमीहरूको हेरचाह गर्न, तिमीहरूका पापहरूको न्याय गर्न देह नबनेको भए, के तिमीहरू धेरै अघि नै पातालमा पर्नेथिएनौ र? यदि म देह नबनेको भए र तिमीहरूको माझमा मैले आफैलाई नम्र नबनाएको भए, तिमीहरू परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावको एक प्रतिभार कसरी हुन सक्थ्यौ र? के मैले मानिसको रूप धारण गरेकोले र तिमीहरूलाई महान् मुक्ति प्राप्त गर्न सक्षम बनाउन म तिमीहरूमाझ आएकोले नै तिमीहरू प्रतिभार भएका होइनौ र? के म देह बनेकोले नै तिमीहरूले यो मुक्ति प्राप्त गरेका होइनौ र? यदि परमेश्‍वर तिमीहरूसँग बस्‍नका लागि देह नबन्‍नुभएको भए, के तिमीहरूले अझै पनि मानव नरकमा कुकुर र सुँगुरभन्दा तुच्छ जीवन जिउँदैछौ भनी थाहा पाउनेथियौ? के तिमीहरू देहको मेरो कामको प्रतिभार भएकोले नै तिमीहरूलाई सजाय र न्याय गरिएको छैन र? तिमीहरूका निम्ति प्रतिभारको कामभन्दा उपयुक्त अर्को काम छैन, किनकि तिमीहरू प्रतिभार भएकाले नै तिमीहरूलाई न्यायको माझमा मुक्ति दिइएको छ। के तिमीहरूलाई तिमीहरू प्रतिभारको रूपमा काम गर्न योग्य हुनु तिमीहरूको जीवनको आशिष्‌ हो जस्तो लाग्दैन? तिमीहरूले केवल प्रतिभारको काम गर्छौ, तैपनि तिमीहरूले यस्तो मुक्ति प्राप्त गर्छौ, जुन तिमीहरूले पहिले कहिल्यै न त पाएका न त कल्पना गरेका थियौ। आज, तिमीहरूको कर्तव्य एक प्रतिभार हुनु हो र तिमीहरूले पाउने इनामचाहिँ भविष्यमा पाउने अनन्तका आशिष्‌हरू हुन्। तिमीहरूले पाएको मुक्ति आजको दिनको कुनै क्षणिक अन्तर्ज्ञान वा बितेर जाने ज्ञानको केही भाग मात्र होइन, यो त ठूलो आशिष्‌ अर्थात् जीवनको अनन्त निरन्तरता हो। मैले तिमीहरूलाई जित्‍न “प्रतिभार” प्रयोग गरेको भए पनि, तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ कि यो मुक्ति र आशिष् तिमीहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि दिइएको हो; यो विजयको लागि हो, र यो तिमीहरूलाई मैले अझ राम्ररी मुक्ति दिऊँ भनेर पनि हो। “प्रतिभार” तथ्य हो, तर तिमीहरू प्रतिभार हुनुको कारण तिमीहरूको विद्रोहीपन हो र यही कारणले गर्दा नै तिमीहरूले ती आशिष्‌हरू प्राप्त गरेका छौ, जुन अरू कसैले कहिल्यै प्राप्त गरेको छैन। आज तिमीहरूलाई हेर्न र सुन्‍न लगाइएको छ; भोलि तिमीहरूले प्राप्त गर्नेछौ, र त्योभन्दा पनि बढी, तिमीहरू ठूलो रूपमा आशिषित हुनेछौ। यसैले, के प्रतिभारहरू ठूलो मूल्यका छैनन् र? आजको विजयको कामका प्रभावहरूलाई प्रतिभारको रूपमा काम गर्ने तिमीहरूका विद्रोही स्वभावहरूद्वारा प्राप्त गरिन्छ। भन्‍नुको मतलब, सजाय र न्यायको दोस्रो घटनाको चरमोत्कर्ष भनेको तिमीहरूको फोहोर र विद्रोहलाई एक प्रतिभारको रूपमा प्रयोग गर्नु हो, जसले तिमीहरूलाई परमेश्‍वरको धर्मी स्वभाव देखाउँछ। जब तिमीहरूले न्याय र सजायको दोस्रो घटनामा आफैलाई फेरि आज्ञाकारी बनाउँछौ, तब परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावको सम्पूर्णता तिमीहरूलाई खुल्लमखुल्ला प्रकट गरिन्छ। भन्‍नुको अर्थ, जब तिमीहरूले विजयको कामलाई स्वीकार गर्ने कार्य समाप्त हुन्छ, त्यसै बेला तिमीहरूले प्रतिभारको कर्तव्य पूरा गर्ने काम पनि समाप्त हुन्छ। तिमीहरूलाई नाम दिने मेरो उद्देश्य होइन। बरु, म विजयको कामको पहिलो घटनालाई पूरा गर्न परमेश्‍वरको धर्मी र उल्‍लङ्घन गर्न नसकिने स्वभाव प्रकट गर्दै तिमीहरूको सेवा-कर्ताहरूको भूमिकालाई प्रयोग गर्दै छु। तिमीहरूका तुलनात्मक कुराद्वारा, प्रतिभारको रूपमा काम गर्ने तिमीहरूका विद्रोहीपनद्वारा विजयको कामको दोस्रो घटनाका प्रभावहरू हासिल हुन्छन्, र यसरी परमेश्‍वरको धर्मी स्वभाव सम्‍पूर्ण रूपमा तिमीहरूलाई देखाइन्छ, जसलाई पहिलो घटनामा पूर्ण रूपमा प्रकट गरिएको थिएन र तिमीहरूलाई परमेश्‍वरको धर्मी स्वभाव, उहाँ जे हुनुहुन्छ त्यो सबै सम्‍पूर्ण रूपमा देखाइन्छ, जसमा उहाँको कामको बुद्धि, आश्‍चर्य र निष्कलङ्क पवित्रता सामेल छन्। यस्तो कार्यको प्रभाव विभिन्‍न अवधिमा गरिएका विजयद्वारा र विभिन्‍न हदका न्यायद्वारा हासिल गरिन्छ। न्याय जति चरमोत्कर्षको नजिक पुग्छ, त्यति नै बढी त्यसले मानिसहरूको विद्रोही स्वभाव प्रकट गर्छ, र विजय पनि उत्ति नै बढी प्रभावकारी हुन्छ। विजयको यो कामको अवधिमा परमेश्‍वरको सम्पूर्ण धर्मी स्वभावलाई स्पष्ट पारिन्छ। विजयको कामलाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ, र यसका फरकफरक चरण र हदहरू छन्, र अवश्य नै, हासिल गरिने प्रभावहरू पनि फरकफरक नै छन्। भन्‍नुको अर्थ, मानिसहरूको समर्पणको हद अझै गहन बनेको छ। यसपछि मात्र मानिसहरूलाई सिद्धताको सही मार्गमा पूर्ण रूपमा ल्याइन्छ; विजयका सबै काम पूरा भएपछि मात्र (जब दोस्रोपटकको न्यायले अन्तिम प्रभाव हासिल गरेको हुन्छ) मानिसहरूको न्याय गरिँदैन, बरु जीवनको अनुभव गर्ने सही मार्गमा प्रवेश गर्न दिइन्छ। किनकि न्याय विजयको एक प्रतिनिधित्व हो, र विजयले न्याय र सजायको रूप लिन्छ।
परमेश्‍वर सबैभन्दा पछौटे र फोहोरी ठाउँमा देह बन्‍नुभयो र यस्तो तरिकाले मात्र परमेश्‍वरले उहाँको पवित्र र धर्मी स्वभावको सम्पूर्णता स्पष्ट रूपमा देखाउन सक्‍नुहुन्छ। अनि उहाँको धर्मी स्वभाव के मार्फत देखाइन्छ? यो त्यस बेला देखाइन्छ जब उहाँले मानिसको पापको न्याय गर्नुहुन्छ, जब उहाँले शैतानको न्याय गर्नुहुन्छ, जब उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ, र जब उहाँले उहाँको विरोध र उहाँविरुद्ध विद्रोह गर्ने शत्रुहरूलाई तुच्छ ठान्‍नुहुन्छ। मैले आज बोल्ने वचनहरू मानिसका पापको न्याय गर्न, मानिसको अधर्मीपनको न्याय गर्न, मानिसको अवज्ञालाई श्राप दिनका निम्ति हुन्। मानिसको कुटिलपन र कपट, मानिसका बोलीवचन र कामहरू—परमेश्‍वरको विरुद्धमा रहेका यी सबैलाई न्यायको दायरामा ल्याउनुपर्छ, र मानिसको अवज्ञाका सबै कुरालाई पापको रूपमा भर्त्सना गरिनुपर्छ। उहाँका वचनहरू न्यायका सिद्धान्तहरूमा केन्द्रित छन्; उहाँले आफ्नो धर्मी स्वभाव प्रकट गर्न मानिसको अधर्मीपनको न्याय, मानिसको विद्रोहीपनको श्राप, र मानिसको कुरूप अनुहारको खुलासालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। पवित्रता उहाँको धर्मी स्वभावको प्रतिनिधित्व हो र वास्तवमा परमेश्‍वरको पवित्रता नै उहाँको धर्मी स्वभाव हो। तिमीहरूका भ्रष्ट स्वभाव नै आजका वचनहरूका सन्दर्भ हुन्—बोल्‍न र न्याय गर्न, अनि विजयको काम पूरा गर्न म तिनलाई प्रयोग गर्छु। वास्तविक काम यही मात्र हो र यसले मात्र परमेश्‍वरको पवित्रतालाई पूर्ण रूपमा चम्काउँछ। यदि तँमा अलिकति पनि भ्रष्ट स्वभाव छैन भने, परमेश्‍वरले तँलाई न्याय गर्नुहुनेछैन, न त उहाँले तँलाई उहाँको धर्मी स्वभाव नै देखाउनुहुनेछ। तँमा भ्रष्ट स्वभाव भएकोले, परमेश्‍वरले तँलाई त्यसै छोड्नुहुनेछैन, र यसै मार्फत उहाँको पवित्रतालाई देखाइन्छ। यदि परमेश्‍वरले मानिसको अपवित्रता र विद्रोहीपन अति ठूलो भएको देख्‍नुभयो र पनि उहाँ बोल्नुभएन वा तेरो न्याय गर्नुभएन, र तेरो अधर्मीपनका लागि तँलाई सजाय पनि दिनुभएन भने, त्यसले उहाँ परमेश्‍वर हुनुहुन्‍न भन्‍ने प्रमाणित गर्छ, किनकि उहाँमा पापप्रति कुनै घृणा हुनेथिएन, उहाँ मानिस झैं फोहोरी हुनुहुनेथियो। आज तेरो फोहोरकै कारण म तेरो न्याय गर्छु, र तेरो भ्रष्टता र विद्रोहीपनकै कारण म तँलाई सजाय दिन्छु। मैले तिमीहरूलाई आफ्नो शक्ति देखाइरहेको वा जानीजानी तिमीहरूलाई दमन गरिरहेको छैन; यस फोहोरको देशमा जन्मेका तिमीहरू फोहोरद्वारा नराम्रोसँग दूषित भएका हुनाले म यी कुराहरू गर्छु। तिमीहरूले आफ्नो सत्यनिष्ठता र मानवता गुमाएका छौ र तिमीहरू संसारको सबैभन्दा फोहोरी कुनामा जन्मेका सुँगुरहरूजस्ता भएका छौ, र यही कारणले गर्दा तिमीहरूको न्याय गरिन्छ र म तिमीहरूमाथि क्रोध बर्साउँछु। ठीक यही न्यायको कारण तिमीहरूले परमेश्‍वर धर्मी परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, र परमेश्‍वर पवित्र परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी बुझ्न सकेका छौ; उहाँको यही पवित्रता र धार्मिकताको कारणले नै उहाँले तिमीहरूको न्याय गर्नुहुन्छ र तिमीहरूमाथि आफ्नो क्रोध बर्साउनुहुन्छ। मानिसहरूको विद्रोहीपन देख्दा उहाँले उहाँको धर्मी स्वभाव प्रकट गर्न सक्‍नुहुने भएकोले र मानिसको फोहोर देख्दा उहाँले उहाँको पवित्रता प्रकट गर्न सक्‍नुहुने भएकोले, यही नै उहाँ परमेश्‍वर स्वयम् हुनुहुन्छ, जो दूषित नपारिएको र पवित्र भएर पनि उहाँ फोहोरको देशमा बस्‍नुहुन्छ भनी देखाउन पर्याप्त हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति अरूसँग हिलोमा लडबडिन्छ, र उभित्र केही पनि पवित्र छैन भने र ऊसँग कुनै धर्मी स्वभाव छैन भने, ऊ मानिसको अधर्मको न्याय गर्न योग्य हुँदैन, न त ऊ मानिसको न्याय गर्न नै योग्य हुन्छ। यदि कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको आलोचना गर्ने हो भने, के त्यो उनीहरूले आफैलाई झापड हानेजस्तो हुँदैनथ्यो र? एकअर्कामा एकसमान रूपले फोहोरी रहेका व्यक्तिहरू आफूजस्तै व्यक्तिहरूको न्याय गर्न कसरी योग्य हुन सक्छन्? पवित्र परमेश्‍वर स्वयम् मात्र सम्पूर्ण फोहोर मानवजातिको न्याय गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। मानिसले कसरी मानिसकै पापहरूको न्याय गर्न सक्छ? मानिसले कसरी मानिसका पापहरू देख्‍न सक्छ, र ती पापहरूको निन्दा गर्न मानिस कसरी योग्य हुन सक्छ? यदि परमेश्‍वर मानिसका पापहरूको न्याय गर्न योग्य हुनुहुन्‍नथ्यो भने, उहाँ कसरी धर्मी परमेश्‍वर स्वयम्‌ हुन सक्‍नुहुन्थ्यो? जब मानिसहरूका भ्रष्ट स्वभावहरू प्रकट हुन्छन्, परमेश्‍वर मानिसहरूको न्याय गर्नका निम्ति बोल्नुहुन्छ, अनि मात्र मानिसहरूले उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भनी देख्छन्। जब उहाँले मानिसका पापहरू प्रकट गर्दै मानिसलाई उसका पापहरूका निम्ति न्याय र सजाय गर्नुहुन्छ, कुनै पनि व्यक्ति वा थोक यस न्यायबाट उम्कन सक्दैन; सबै फोहोरी कुराहरूलाई उहाँले नै न्याय गर्नुहुन्छ, र यसरी मात्र उहाँको स्वभावलाई धर्मी भन्‍न सकिन्छ। यदि यो अन्यथा थियो भने, तिमीहरू नाउँ र तथ्य, दुवैमा प्रतिभार हौ भनी कसरी भन्‍न सकिन्थ्यो?
इस्राएलमा गरिएको काम र आजको कामको बीचमा ठूलो भिन्‍नता छ। यहोवाले इस्राएलीहरूको जीवनलाई डोऱ्याउनुभयो र त्यहाँ त्यति धेरै सजाय र न्याय थिएन, किनकि त्यसबेला मानिसहरूले संसारलाई थोरै मात्र बुझेका थिए र उनीहरूका भ्रष्ट स्वभावहरू थोरै थिए। त्यसबेला, इस्राएलीहरूले यहोवाको पूर्ण आज्ञापालन गर्थे। जब उहाँले तिनीहरूलाई वेदी बनाउनू भनी भन्‍नुभयो, तब तिनीहरूले तुरुन्तै वेदीहरू निर्माण गरे; जब उहाँले तिनीहरूलाई पूजाहारीको पोसाक लगाउनू भनी भन्‍नुभयो, तिनीहरूले आज्ञापालन गरे। ती दिनहरूमा, यहोवा भेडाको बगाललाई हेरचाह गर्ने गोठालोझैं हुनुहुन्थ्यो, भेडाहरू गोठालोको अगुवाइमा हिँड्थे र चरनका घाँसहरू खान्थे; के खाने, के लगाउने, कसरी बस्‍ने र कसरी यात्रा गर्ने भनी बताउँदै यहोवाले तिनीहरूको जीवनलाई डोऱ्याउनुभयो। त्यो परमेश्‍वरको स्वभाव स्पष्ट पार्ने समय थिएन, किनकि त्यस समयको मानवजाति भर्खर जन्मेको थियो; त्यहाँ विद्रोही र विरोधीहरू थोरै थिए, मानवजातिमाझ त्यति फोहोर थिएन, यसैले मानिसहरूले परमेश्‍वरको स्वभावको प्रतिभारको रूपमा काम गर्न सक्दैनथे। फोहोरको देशबाट आएका मानिसहरूमार्फत नै परमेश्‍वरको पवित्रतालाई देखाइन्छ; आज, उहाँले फोहोरको देशका यी मानिसहरूमा प्रकट भएको फोहोर प्रयोग गर्नुहुन्छ, र उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ, र न्यायमाझ उहाँ जे हुनुहुन्छ सो प्रकटीकरण हुन्छ। उहाँले किन न्याय गर्नुहुन्छ? उहाँले न्यायको वचनहरू बोल्न सक्‍नुहुन्छ, किनकि उहाँले पापलाई घृणा गर्नुहुन्छ; यदि उहाँले मानवजातिको विद्रोहीपनलाई घृणा गर्नु हुँदैनथ्यो भने उहाँ कसरी त्यत्ति रिसाउन सक्‍नुहुन्थ्यो र? यदि उहाँभित्र कुनै घृणा, कुनै इन्कार हुँदैनथ्यो भने, यदि उहाँले मानिसहरूको विद्रोहलाई ध्यान दिनुहुन्‍नथ्यो भने, त्यसले उहाँलाई मानिसजस्तै फोहोर साबित गर्नेथ्यो। उहाँले मानिसलाई न्याय र सजाय गर्न सक्‍नुहुन्छ, किनकि उहाँ फोहोरलाई घृणा गर्नुहुन्छ, र जुन कुरालाई उहाँ घृणा गर्नुहुन्छ त्यो उहाँमा छँदै छैन। यदि उहाँमा पनि विरोध र विद्रोह भएको भए, उहाँले विरोधी र विद्रोहीहरूलाई तुच्छ मान्‍नुहुनेथिएन। यदि आखिरी दिनहरूको काम इस्राएलमा गरिएको भए त्यसको कुनै अर्थ हुनेथिएन। आखिरी दिनहरूको काम किन चीनमा भइरहेको छ, जुन सबैभन्दा अन्धकार र पछौटे ठाउँ हो? यो उहाँको पवित्रता र धार्मिकता प्रदर्शन गर्नका लागि हो। संक्षेपमा, ठाउँ जति धेरै अन्धकार हुन्छ परमेश्‍वरको पवित्रता त्यत्ति नै बढी स्पष्ट रूपमा देखाउन सकिन्छ। वास्तवमा, यी सबै परमेश्‍वरको कामका लागि हो। आज मात्र तिमीहरूले परमेश्‍वर स्वर्गबाट तिमीहरूमाझ खडा हुन तल आउनुभएको छ, तिमीहरूको फोहोरीपन र विद्रोहीपन देखाउनुभएको छ भन्‍ने थाहा पायौ, र अहिले मात्र तिमीहरूले परमेश्‍वरलाई चिन्यौ। के यो सबैभन्दा ठूलो उत्थान होइन र? वास्तवमा, तिमीहरू चीनका मानिसहरूको त्यो समूह हौ जसलाई चुनिएको थियो। तिमीहरू चुनिएकाले र तिमीहरूले परमेश्‍वरको अनुग्रहको आनन्द पाएकाले, र तिमीहरू त्यत्ति ठूलो अनुग्रहको आनन्द लिन योग्य नभएकाले, यसले यी सबै तिमीहरूको सर्वोच्‍च उत्थान हो भन्‍ने प्रमाणित गर्छ। परमेश्‍वर तिमीहरूको सामु देखा पर्नुभएको छ, र तिमीहरूलाई उहाँको सम्पूर्ण पवित्र स्वभाव देखाउनुभएको छ, र उहाँले त्यो सबै नै तिमीहरूलाई दिनुभएको छ, र तिमीहरूले आनन्द लिन सक्‍ने सबै आशिष्‌हरू दिनुभएको छ। तिमीहरूले परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावको स्वाद मात्र पाएका नभई परमेश्‍वरको मुक्ति, परमेश्‍वरको छुटकारा र परमेश्‍वरको असीमित, अनन्त प्रेमको स्वाद पनि पाएका छौ। सबैभन्दा फोहोरी तिमीहरूले त्यत्ति ठूलो अनुग्रह उपभोग गरेका छौ, के तिमीहरू आशिषित छैनौ र? के यो तिमीहरूलाई परमेश्‍वरले उचाल्नुभएको होइन र? तिमीहरूको हैसियत सबैभन्दा नीच छ; तँ अन्तर्निहित रूपमै त्यस्तो ठूलो आशिष्‌ पाउन अयोग्य छस्, तैपनि परमेश्‍वरले अपवादको रूपमा तँलाई उचाल्नुभयो। के तँलाई लाज लाग्दैन? यदि तँ आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असमर्थ छस् भने, तँ अन्त्यमा आफैदेखि लज्‍जित हुनेछस्, र तैँले आफैलाई दण्ड दिनेछस्। आज, तँ अनुशासनमा परेको छैनस्, न त तैँले दण्ड नै पाएको छस्; तेरो देह सुरक्षित र स्वस्थ छ—तर अन्त्यमा, यी वचनहरूले तँलाई लज्‍जित पार्नेछन्। आजको दिनसम्म मैले कसैलाई खुल्लमखुल्ला सजाय दिएको छैनँ; मेरा वचनहरू कठोर होलान्, तर मैले मानिसहरूसित कसरी व्यवहार गर्छु? म तिनीहरूलाई सान्त्वना दिन्छु, तिनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्छु, र तिनीहरूलाई स्मरण गराउँछु। तिमीहरूलाई मुक्ति दिनुबाहेक अरू कुनै पनि कारणले म यो गर्दिनँ। के तिमीहरू साँच्‍चै मेरो इच्छा बुझ्दैनौ? मैले जे भन्छु त्यो तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ र त्यसबाट उत्प्रेरित हुनुपर्छ। अहिले मात्र बुझ्‍ने मानिसहरू धेरै छन्। के यो प्रतिभार हुनुको आशिष् होइन र? के प्रतिभार हुनु सबैभन्दा ठूलो आशिषको कुरा होइन र? अन्त्यमा, जब तिमीहरू सुसमाचार फैलाउन जान्छौ, तिमीहरू भन्‍नेछौ: “हामीहरू खास प्रतिभारहरू हौँ।” तिनीहरूले तँलाई सोध्‍नेछन्, “तिमीहरू खास प्रतिभारहरू हौ भन्‍नुको अर्थ के हो?” अनि तैँले भन्‍नेछस्: “हामी परमेश्‍वरको काम र उहाँको महान् शक्तिको प्रतिभार हौं। हाम्रो विद्रोहीपनद्वारा परमेश्‍वरको सम्पूर्ण धर्मी स्वभाव प्रकाशमा आउँछ; हामी आखिरी दिनहरूको परमेश्‍वरको काममा सेवा गर्ने वस्तुहरू हौं, हामी उहाँका कामका अतिरिक्त भागहरू हौँ र यसका साधनहरू पनि हौं।” त्यो सुन्दा, तिनीहरू छक्‍क पर्नेछन्। अनि तैँले भन्‍नेछस्: “हामी परमेश्‍वरले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको काम पूरा गर्नुभएको र उहाँले सारा मानवजातिलाई जित्‍नुभएको तथ्यका नमुना र उदाहरणहरू हौं। हामी पवित्र वा फोहोरी जे भए पनि, समग्रमा, हामी तिमीहरूभन्दा बढी आशिषित् छौं, किनकि हामीले परमेश्‍वरलाई देखेका छौं, र उहाँले हामीमाथि विजय हासिल गर्ने अवसरको माध्यमद्वारा परमेश्‍वरको महान् शक्तिलाई देखाइएको छ; हामी फोहोरी र भ्रष्ट भएकाले गर्दा मात्रै उहाँको धर्मी स्वभाव प्रकट भएको छ। के तिमीहरूले त्यसरी नै परमेश्‍वरको आखिरी दिनहरूको कामको साक्षी दिन सक्छौ? तिमीहरू योग्यका छैनौ! यो अरू केही नभएर परमेश्‍वरले हामीलाई उच्‍च पार्नुभएको तथ्य हो! हामी अहङ्कारी नभए पनि, हामीले गर्वसाथ परमेश्‍वरको प्रशंसा गर्न सक्छौं, किनकि त्यस्तो महान् प्रतिज्ञाको हकदार कोही पनि हुन सक्दैन र कसैले पनि त्यस्तो ठूलो आशिष्‌ उपभोग गर्न सक्दैन। हामी असाध्यै कृतज्ञ छौं किनभने हामी यति फोहोरी भएर पनि परमेश्‍वरको व्यवस्थापन अवधिमा प्रतिभारको रूपमा काम गर्न सक्छौं।” अनि जब तिनीहरूले सोध्छन्, “नमुना र उदाहरणहरू के-के हुन्?” तैँले भन्‍नेछस्, “हामी सबैभन्दा विद्रोही र फोहोरी मानवजाति हौं; हामी शैतानद्वारा गहन रूपले भ्रष्ट पारिएका छौं, देहमा हामी सबैभन्दा पछौटे र तुच्छ छौं। हामी शैतानद्वारा प्रयोग गरिएकाहरूको उत्कृष्ट उदाहरण हौं। आज, हामी परमेश्‍वरद्वारा जितिने मानवजातिमाझ पहिलो मानिसहरूको रूपमा चुनिएका छौं र हामीले परमेश्‍वरको धर्मी स्वभावलाई देखेका छौं र उहाँको प्रतिज्ञा पाएका छौं; हामी धेरै मानिसलाई जित्‍न प्रयोग भइरहेका छौं, त्यसैले हामी मानवजातिमा जितिएका मानिसहरूको नमूना र उदाहरण हौं।” यी वचनहरूभन्दा राम्रो साक्षी अरू छैन, र यो तेरो सर्वोत्तम अनुभव हो।
अघिल्लो: तँ किन प्रतिभार हुन अनिच्छुक छस्?
अर्को: इस्राएलीहरूले जस्तै सेवा गर्
तपाई र तपाईको परिवारलाई अति आवश्यक छ भनेर आह्वान गर्दै: पीडा बिना सुन्दर जीवन बिताउने मौका प्राप्त गर्न प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्नु। यदि तपाईं आफ्नो परिवारसँग यो आशिष प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न बटन क्लिक गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई प्रभुको आगमनलाई स्वागत गर्ने बाटो फेला पार्न मद्दत गर्नेछौं।
हामीलाई Messenger मा सम्पर्क गर्नुहोस्
देहधारणको रहस्य (२)
त्यो बेला जब येशूले यहूदियामा काम गर्नुभयो, उहाँले खुल्लमखुल्ला काम गर्नुभयो, तर अहिले म तिमीहरूको माझमा गुप्त रूपमा काम गर्छु र बोल्छु।...
परमेश्‍वर मानिसको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ
तँ यस संसारमा रुँदै आएको क्षणदेखि नै तैँले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न थाल्छस्। परमेश्‍वरको योजना र उहाँको विधिको लागि तैँले आफ्नो भूमिका...
विजयको कामको भित्री सत्यता (४)
सिद्ध बनाइनु भनेको के हो? जितिनु भनेको के हो? मानिसहरूलाई जित्नका निम्ति कुन मापदण्डहरू पूरा हुनुपर्दछ? र तिनीहरूलाई सिद्ध बनाउनका निम्ति...
देहधारणको रहस्य (४)
तिमीहरूलाई बाइबलको पृष्ठभूमिको कथा र यसको निर्माणको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ। यो ज्ञान ती व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा हुँदैन जसले परमेश्‍वरको...
वचन देहमा देखा पर्नुहुन्छ न्याय परमेश्‍वरको घरबाटै सुरु हुन्छ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूका ख्रीष्टका अत्यावश्यक वचनहरू परमेश्‍वरका दैनिक वचनहरू सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरका छनौटगरिएका वचनहरू ख्रीष्‍टको न्याय-आसनको अघिका अनुभवका गवाहीहरू राज्यको सुसमाचार फैलाउने सम्‍बन्धी मार्गनिर्देशनहरू
सेटिङ्ग पुस्तकहरू खोजी भिडियोहरू खोजी गर्ने बाकसमा खोजी गर्ने विषय प्रविष्ट गर्नुहोस्। कुनै पनि शब्द मिलेन। कृपया केही नयाँ शब्दावलीको प्रयोग गर्नुहोस्। 1 नतिजा2नतिजाहरू पादटिप्पणी अघिल्लो
यो शब्दको खोजी गर्नुहोस्
यो पुस्तकमा खोजी गनुृहोस्
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली App डाउनलोड गर्नुहोस्
प्रयोगका शर्तहरू गोपनीयता नीति आभार कुकिज नीति
प्रतिलिपि अधिकार © २०२२ सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली। सबै अधिकार सुरक्षित।
xxxxx xxxxx https://ne.godfootsteps.org/privacy-policy.html रद्द गर्नुहोस् Yes